August 2021 - Richard Myo Thant
“History repeats itself.” သမိုင်းဟာတပတ်လည်တတ်သတဲ့။
August 31, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on “History repeats itself.” သမိုင်းဟာတပတ်လည်တတ်သတဲ့။
252 Pageviews အမေရိကန်တွေသင်ခန်းစာယူတတ်မယ်ထင်ထားခဲ့တာ။ The Fall of Saigon မှာ အမေရိကန်သံရုံးဆီပြေးဝင်ကြတဲ့ဗီယက်နမ်တွေ။ ကျနော်တို့ငယ်ငယ်က လှေစီးဒုက္ခသည်လို့မှတ်ထားခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်တွေ။ အခုတော့အဲ့ဒီ ဗီယက်နမ်ဟာ လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်နေပါပြီ။
318 Pageviews အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒင်ဟာ အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝပြီး သင်ခန်းစာယူတတ်မယ့်လူကြီးလို့ ထင်ခဲ့တာ။ ဗီယက်နမ်တွေကတော့ Last Day of Saigon က အိမ်ခေါင်မိုးကို Sky 22 Rooftop Cafe တောင်ဖွင့်ထားတယ်။ တချိန်က သမိုင်းဝင်နေရာပေါ့။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့ ဆိုင်ဂုံမြို့တော်ကြီးအကျမှာ ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းလို့မလွယ်တဲ့ ကပ်သီးကပ်သပ်ခေါင်မိုးလေးပေါ်မှာ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ လူတွေကယ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်။
196 Pageviews ဒီကိစ္စကို ဩဂတ်စ် ၁၆ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်မှာပထမဦးဆုံးစတွေ့တာက Moderna ရဲ့ ဂျပန် distributor ဆေးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Takeda Pharmaceutical ဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးဆေးပုလင်း ၃၉ ပုလင်းမှာ မသန့်တာတွေပါနေတယ်လို့ ထင်ရကြောင်းသတင်းပို့ပါတယ်။အဲ့ဒီ ၃၉ ပုလင်းကနေ Lot 3004667 က ပုလင်းပေါင်း (၅၇၀၀၀) ကိုသုံးစွဲတာရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။ Lot 3004734 နဲ့ Lot 3004956 တို့ကိုပါထပ်ပြီးရပ်ဆိုင်းပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ Lot 3004734 ကနေ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ်နဲ့ အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ယောက်ဟာ ဆေးထိုးပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ထိုးခဲ့တဲ့ ပုလင်းထဲမှာ #မသန့်တာပါတဲ့အထောက်အထားမတွေ့ရပါ။ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ #ဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် အဖျားတက်ပါတယ်။ အဖျားတက်ပြီး (၂) ရက်အကြာမှာ သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့သေဆုံးရသလဲကို အခုထိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲပါ။ […]
?? အာဖကန်မြေကနောက်ဆုံးဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်သားဟာ ဗိုလ်ချုပ် Chris Donahue ဖြစ်ပါတယ်။
August 30, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ?? အာဖကန်မြေကနောက်ဆုံးဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်သားဟာ ဗိုလ်ချုပ် Chris Donahue ဖြစ်ပါတယ်။
276 Pageviews ယခုဓာတ်ပုံဟာ သမိုင်းဝင်ပုံဖြစ်သွားပါပြီ။ ပုံထဲမှာ ညကြည့်မီးနဲ့ရိုက်ထားလို့သေချာမမြင်ရတာပါ။ Major General Chris Donahue ဟာ အမှတ် (၈၂) လေကြောင်းချီစစ်တပ်ရဲ့ တပ်မမှုး two-star general ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
?? စင်ကာပူမှာ အိမ်ရှင်အမျိုးသားစားသောက်တဲ့အထဲကို ဖိလစ်ပိုင်အိမ်အကူက ရာသီသွေးနဲ့ဆီးထည့်ရောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။
August 25, 2021 September 3, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ?? စင်ကာပူမှာ အိမ်ရှင်အမျိုးသားစားသောက်တဲ့အထဲကို ဖိလစ်ပိုင်အိမ်အကူက ရာသီသွေးနဲ့ဆီးထည့်ရောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ။
280 Pageviews အိမ်ရှင်အမျိုးသားရဲ့ဖုန်းထဲကို ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ည ၁၁နာရီ ၁၄ မိနစ်မှာ လူတစ်ယောက်ဆီ မက်ဆေ့ဝင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မက်ဆေ့ထဲမှာ သူတို့အိမ်အကူ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး Canares Rowena Ola (၄၄ နှစ်ဟာ) ဟာ အစားအသောက်ထဲမှာ ရာသီသွေးနဲ့ ဆီးထည့်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမက်ဆေ့ပို့သူဟာ အိမ်အကူရဲ့ရည်းစားဟောင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အိမ်ရှင် အမျိုးသားဟာ ရှော့အကြီးကြီးရသွားပြီး ချက်ခြင်းရဲစခန်းကိုပြေးပါတယ်။ ရဲကဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးကိုစစ်ဆေးတော့ ဟုတ်တယ်လို့တစ်ခါပြောပြီး ဆောရီးလို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအိမ်ရှင်အမျိုးသားဟာ သူ့အမျိုးသမီးရယ်ကလေးတွေရယ်နဲ့ အတူနေတာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ နေ့လည်စာထမင်းဘူးတွေ၊ ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေ၊ ထမင်းအိုး ဟင်းအိုးတွေကို အကုန်လွှင့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်မှာလည်း အဲ့ဒီဖိလစ်ပိုင်အိမ်အကူကိုမထားရဲတော့လို့ ဖိလစ်ပိုင်သံရုံးကိုသွားအကူအညီတောင်းတာ မအောင်မြင်ပါ။ နောက် ၁၁ ရက်အကြာမှာမှသူ့အိမ်ကနေ ထွက်သွားဖို့ နေရာစီစဉ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြဿနာက မက်ဆေ့ပို့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်အိမ်အကူရဲ့ […]
?? အမေရိကန် FDA က ivermectin ကို Covid အတွက်သုံးနေခြင်းအား ပြင်းထန်စွာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။
August 23, 2021 September 2, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ?? အမေရိကန် FDA က ivermectin ကို Covid အတွက်သုံးနေခြင်းအား ပြင်းထန်စွာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။
258 Pageviews “သင်တို့ဟာ နွားတွေ မြင်းတွေမဟုတ်ဘူး၊ အရေးကြီးတယ်၊ သုံးစွဲတာရပ်တော့” လို့ ဩဂတ်စ်လ ၂၁ ရက်နေ့က သတိပေးချက် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ “You are notahorse. You are notacow. Seriously, y’all. Stop it.” Mississippi ပြည်နယ်မှာ ဆေးအဆိပ်သင့်လို့ ဖုန်းခေါ်တဲ့ လူနာတွေရဲ့ ၇ ရာနှုန်းဟာ ivermectin ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို Covid အတွက်မသုံးစွဲဖို့ သတိပေးရတာ အကြောင်းရင်း (၃) ချက်ရှိပါတာ်။ ivermectin ဟာ antuviral ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ဆေးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ နွားတွေ၊ မြင်းတွေမှာ ကပ်ပါးသန်ကောင်အတွက်သုံးတဲ့ဆေးဖြစ်ပြီး နွားတွေမြင်းတွေဟာ လူထက်ကိုယ်အလေးချိန်အများကြီးပိုတဲ့အတွက် ဆေးအရမ်းပြင်းပြင်းပေးထားတာပါ။ လူမှာကပ်ပါးသန်ကောင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေ (၂) […]
?? မင်းသားကြီး ဆန်နီချီးဘားဟာ အသက် (၈၂) နှစ်အရွယ်မှာ Covid complications နဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
August 20, 2021 September 4, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ?? မင်းသားကြီး ဆန်နီချီးဘားဟာ အသက် (၈၂) နှစ်အရွယ်မှာ Covid complications နဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
210 Pageviews ဆာမူရိုင်းရုပ်ရှင်တွေနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသားကြီးဆန်နီချီးဘားဟာ ကြာသပတေးနေ့က တိုကျိုမြို့နားကဆေးရုံတစ်ခုမှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
?? အာဖကန်နစ္စတန်ကလူတွေ ဘာကြောင့်အသည်းအသန်ထွက်ပြေးနေကြတာလဲ❓
August 16, 2021 September 3, 2021 Richard Myo ThantLeaveaComment on ?? အာဖကန်နစ္စတန်ကလူတွေ ဘာကြောင့်အသည်းအသန်ထွက်ပြေးနေကြတာလဲ❓
242 Pageviews လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁ နှစ် က TIME မဂ္ဂဇင်းမှာ Bibi Aisha ရဲ့ပုံပါလာခဲ့ပါတယ်။ ဘီဘီက နာမည်ရှေ့မှာ lady ဆိုတဲ့သဘောထည့်ခေါ်တာပါ။ အိုက်ရှားဟာ အတော်ချောမောလှပတဲ့ အာဖကန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမအသက် (၁၄) နှစ်အရွယ်မှာပဲ တာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတစ်ယောက်ထံကို အတင်းပေးစားတာခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့အဖေဘက်က အဲ့ဒီတာလီဘန်ဘက်ကို လူသေစေခဲ့မှုအတွက်သွေးကြွေးပေးရန်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ချောချောလှလှသမီးနဲ့ သွေးကြွေးချေခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီတာလီဘန်ရော၊ သူ့မိသားစုကပါ အိုက်ရှားကိုအလွန်နှိပ်စက်တဲ့အတွက် လေးနှစ်အကြာမှာ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ရဲကဖမ်းမိပြီး ထောင် (၅) လချကာသူ့အဖေထံပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ သူ့အဖေက သူ့ယောက်ျားဆီပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ အိုက်ရှားရဲ့ယောကျ်ားရယ်၊ ယောက်ခထီးရယ်၊ အခြားလူသုံးယောက်ရယ်က အိုက်ရှားကို တောင်တွေပေါ်ခေါ်သွားပြီး နှာခေါင်းနဲ့နားရွက်ကိုဖြတ်ပစ်ကာ မသေမရှင်ပစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ သူမရဲ့အဖိုးအိမ်ကို တွားတွားသွားခဲ့ပေမယ့် အဖိုးအိမ်ကကယ်ဆယ်ဖို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့တွေ့ပြီး အမေရိကန်စစ်တပ်ကဆေးကုသပေးကာ […]
242 Pageviews Whalefish လေးတွေအကြောင်းရှာဖတ်ရင်းနဲ့ ဝင်ကစွပ်တွေအကြောင်းရောက်သွားတယ်။ BBC ရဲ့ documentary ထဲမှာ hermit crab ဝင်ကစွပ်လေးတွေဟာ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာတန်းစီနေရာယူနေကြတယ်။ ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ အခွံအလဲအလှယ် trade လုပ်ကြတာ။ ဝင်ကစွပ်ဟာ နေပူတဲ့သဲသောင်ပြင်မှာ အခွံမရှိပဲကြာကြာအသက်မရှင်နိုင်ဘူး။ သူတို့အခွံလဲလှယ်ရင် အမြန်ဆုံးလုပ်ရတယ်။ မြင်ဖူးတဲ့သူရှားတယ်။ ဝင်ကစွပ်လေးတစ်ကောင်က သူ့ကိုယ်ခန္ဓာအရွယ်ကြီးလာတော့ နေရတာကျပ်လာပြီး ပိုကြီးတဲ့ခရုခွံကိုပြောင်းမှဖြစ်တော့မယ်။ အဲ့မှာ ခရုခွံအကြီးတစ်ခုကိုသွားတွေ့တယ်။ သူ့ထက်အများကြီးကြီးနေတယ်။ ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ အဲ့ခရုခွံနားမှာအသာလေးစောင့်နေလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ အခြားဝင်ကစွပ်တွေတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ရောက်လာပြီး ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်တန်းစီကြပါလေရော။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ ကြည့်လို့ရတယ်။ အဲ့မှာအကြီးဆုံးကောင်က ခရုံခွံဘက်မှာနေပြီး အငယ်ဆုံးကောင်က အစွန်ဆုံးမှာနေလိုက်တယ်။ တန်းစီပြီးရယ်ဒီဆိုတာနဲ့ ဘောင်ဘီတယောက်နဲ့တယောက်လဲသလို အမြန်ချွတ်လဲတော့တာပဲ။ အကြီးဆုံးအကောင်က သူ့အခွံထဲကအမြန်ထွက်ပြီး ခရုခွံကြီးထဲအမြန်ဝင်လိုက်တာနဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးအကောင်က သူ့အရင်အခွံကိုဝင်ယူနေပြီ။ အဲ့လိုနဲ့ဆင့်ကဲဆင့်ကဲအခွံလဲလှယ်သွားတာ အရမ်းစစနစ်ကျတယ်။ Moral of the Story ============= […]